आज प्रणय दिवस : प्रेमसम्बन्ध यसरी हुन्छ सफल ! - Thahaonline.com | थाहा अनलाइन Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
आज प्रणय दिवस : प्रेमसम्बन्ध यसरी हुन्छ सफल !
थाहा अनलाइन २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ११:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं – अंग्रेजी क्यालेन्डरमा दोस्रो महिना अर्थात् फेब्रुअरी महिनालाई प्रेमको महिनाको रुपमा लिईन्छ । त्यसैमाथि आज प्रेमदिवस अर्थात् भ्यालेन्टाईन डे । यसै अवसर पारेर श्रीमान् श्रीमती वा प्रेमी प्रेमीका कतै जाने र एक दिन सँगै खाने तथा समय बिताउने गरिरहेका हुन्छन् । घरको खाना उही लाईट, एउटै वातावरणमा बसेर तपाईलाई दिक्दारी लाएको भए यो मौका पारेर तपाईले कुनै रेस्टुरेन्ट वा पार्कमा समय बिताउन सक्नुहुन्छ । पक्कैपनि संसारका हरेक जीवित प्राणिलाई माया ममता महशुस हुन्छ ।
अझ मानिसमा यो विशेष अनुभूति हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई आफू र आफ्नो ‘पार्टनर’को सम्बन्ध राम्रो र सुमधुर होस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, समयको व्यस्तताका कारण होस् या अन्य कुनै कारणले होस् कतिपय मान्छेहरुको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । सुमधुर सम्बन्धको चाहना हुँदाहुँदै पनि उनिहरुको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । आज हामी तपाईंलाई विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा आफ्नो सम्बन्ध कसरी राम्रोे र सुमधुर बनाउने भन्ने जानकारी दिँदैछौँ ।
६. हरेक रुपमा तिमी मलाई सुन्दर लाग्छ ।